उद्धार नामको उडान र लावारिस पिडित – Deep Sanchar
गृहपृष्ठ ∕ विशेष रिपोर्ट ∕ उद्धार नामको उडान र लावारिस पिडित
करिम बक्स मियाँ असार ९, २०७७ गते १२:४९ मा प्रकाशित
म कतार आएको गत वर्षको अप्रिल १५ तारीक हो, कतार आएकै पाचौं दिनमा ज्वोरो विग्रीएर टाईफाईको स्थितिमा पुगेपछि अस्पताल भर्ना भएँ। त्यहिबेला कम्पनीले मलाई भागेको आरोपमा उजुरी गरेछ। त्यसैले काम, तलव र बस्ने सुविधाको ज्ञारेन्टी हुने कुरै भएन । न्यायका लागि म दूतावासदेखि मानवअधिकारको कार्यालयसम्म धेरैपटक धाएँ, मेरो केही उपाय लागेन। अन्ततः मैले रोई कराई तथा सरसापट गरेर हवाई टिकट लिएँ घर फर्कनलाई।
मजदुर संगठनको नाममा खोलिएका केही राजनितिक संस्थाहरूको अनुरोधमा कार्यकर्ताधारी पिडितहरुले मौका पाए, साझा संस्था भनेर खोलिएका संस्थाका ठूलै ओहिदासीनहरुको एक फोनमा दर्जनौंले अवसर पाए नेपाल जानलाई, तर हजारौं हनीफहरू आफ्नो नाममात्र लिस्टमा पार्नलाई भौतारी रहेका छन्।
एकजना अनिल नाम गरेका भाईले सूक्ष्म तरीकाले दूतावासको नामलिस्ट केलाए, ५ हजार १ सय १२ जनाको लिस्टमा नाम नै नभएका १४ जना नेपाल पुगे। सन् १८ अगस्त २०१९ भन्दा पहिला तीन वर्षका लागि मलेसियाको श्रम स्वीकृति पाएका तर कतारमा रहेका करीव दर्जनभन्दा भढी महिलाहरुपनि उडान प्राथमिकतामा परेर नेपाल पुगी सके। कसरी आए, कुन गिरोहबाट आए त्यो नेपाल सरकारले जानोस वा स्वयम गिरोहले । तर अवैध प्रवेश भएको भने पक्का हो । नेपाल एयरपोर्टले राम्रै पैसा कमाउने मैका दिएको अनुमान सहजै लगाउन सकिन्छ ।
के हनीफहरुको पालो आउला ? गम्भीर बिरामी भएका अर्शदहरुले मौका पाउलान् ? कवीरहरुले आफ्नी आमालाई श्वास चल्दै गर्दा अन्तिम पटक भेट्न पाउलान् ?
एनआरएनएमा समस्याको जड:अरुलाइ आउनै नदिने, अर्को बन्न नपाइने, नागरिकता जसरी…
पैसाको अभावले मुमाबडामहारानी रत्नको बिचल्ली, औषधि र पानीसमेत किनेर खान…
सर्वोच्चको आँगनमा ‘बहुमत’को परेड